Ufikelwe umunyu ehlonishwa ngakubo
UKhuzani "Indlamlenze" Mpungose ufikelwe wumunyu ngesikhathi ehlonishwa nguMasipala wangakubo eNkandla. Isithombe: Facebook
ISIHLABANI somculo kamaskandi, uKhuzani "Indlamlenze" Mpungose, sifikelwe wumunyu ngesikhathi sihlonishwa nguMasipala wangakubo eNkandla ngegalelo laso emculweni. UKhuzani ubungazwe esaphila nabafundi abaqhakambise indawo yaseNkandla kuGrade 12 nyakenye kumaMayoral Excellence Awards 2021 And Study Assistance, eNkandla Indoor Sports Centre ngoLwesine.
"Ngizithoba kakhulu ngokuhlonishwa njengomculi kamaskandi osemncane, kodwa namhlanje ngizithola ngihlonishwa. Kungifikisela umunyu uma ngizwa kukhulunywa ngami kanje, ngiphila. Ingoba ngike ngibone kukhulunywa ngabantu sebengasekho, kuthiwa benza kahle. Ubeshaya, ehlula amaqhawe..."
UKhuzani uthe yize esehlonishwe kakhulu kodwa okwaseNkandla kuvelele ngenxa yokuthi uyilokhu ayikho ngenxa yomphakathi wakule ndawo okuyiwo owamkhulisa nomxhasayo.
Imeya yaseNkandla, uMnuz Thami Ntuli, uchaze uKhuzani njengengqalabutho abaziqhenya kakhulu ngayo kule ndawo ngenxa yamagalelo ayo. "Sihlonipha leli qhawe namhlanje, uKhuzani "Indlamlenze" Mpungose. Singabantu baseNkandla sibone kufanele sikuhloniphe kumaMayoral Excellence Awards. Akuhlonishwa nanoma ngubani. Ubokwazi uma ufike kulesi sigaba, sisuke siziqhenya kanjani ngawe. Sewuhlonishwe nabantu abasezingeni eliphezulu," kusho uNtuli ohloniphe uKhuzani ngesikhumba senkomo yabeNguni, isitifiketi, indondo, isiklabhu nesigingci sebhesi.
Uhlelo lwale ndumezulu yalo mcimbi beluphethwe umhleli futhi ongumfundi wezindaba zesiZulu kuSABC 1, uVusizwe Langa nomsakazi woKhozi FM, uTshatha Ngobe.
Phakathi kwezicukuthwane ebezikhona kubalwa noMntwana uPhumzile Buthelezi ongusiHlalo we-IFP Women' Brigade kuzwelonke futhi oyiLungu lesiShayamthetho eKZN, uMnuz Mthokozisi Nxumalo ongusiHlalo we-IFP Youth Brigade kuzwelonke neLungu lePhalamende, Inkosi uMzamo Buthelezi oyiPhini likaMengameli weNkatha kuzwelonke futhi oyiLungu lePhalamende, uMnuz Siphosethu Ngcobo onguNobhala-Jikelele weNkatha futhi uyiLungu lePhalamende kuzwelonke.
Kusukume wonke umuntu ngesikhathi uKhuzani esecula bukhoma unqambothi lwengoma yakhe ehlukanise unyaka oKhozini ngo2020. Lo mculi ubuye wahlonishwa nangokugcwalisa iMoses Mabhida Stadium, eThekwini ngo2019. Ngaphandle kwalokho uKhuzani useke wahlula bonke abaculi kumaDstv Mzansi Viewers' Choice Awards ngo2018 futhi wahlabana nangeBest Maskandi Award kumaSouth African Music Awards (Sama) ngo2017. Usebuya nase-United States of America ngokohlelo lwamaSatma Awards ngo2016.